यस्ता गल्तिहरू भुलेर पनि नगर्नुहोला भगवान शिवको उपासना गर्दा ! सेयर गरौ « Online Tv Nepal
यस्ता गल्तिहरू भुलेर पनि नगर्नुहोला भगवान शिवको उपासना गर्दा ! सेयर गरौ
Published :7March, 2020 3:32 pm
भगवान शिवको उपासना गर्दा हर प्रकारका कष्ट निवारण हुने तथा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।शिव प्रसन्न भएमा जीवनमा कुनै संकट नआउने धार्मीक मान्यता छ । करौडौ श्रद्धालु हरेक दिन भगवान शिवको पूजाआराधना गर्दछन् ।तर शिवलाई प्रसन्न पार्ने नाममा कहिलेकाँही केहि विधि र सामग्रीमा ख्याल पुर्‍याइएन भने यसबाट शिवलाई प्रसन्न पार्न सकिन्न । त्यसैले शिवको पूजा गर्दा यी विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।
१. भगवान शिवलाई तुलसीको पात वा तुलसीको कुनै पनि सामग्रीबाट पूजा गर्नुहुँदैन । तुलसीलाई विष्णु निकट मानिन्छ, जसलाई शिवले स्विकार गर्दैनन् । यसर्थ शिवको उपासनामा तुलसी चढाउनु बर्जित छ ।२. तिल वा तिलबाट बनेका कुनै पनि प्रसाद, तेल लगायतका कुनै पनि वस्तु भगवान शिवलाई अर्पण गर्नुहुँदैन । तिल भगवान विष्णुको मयल(मैलो)बाट उत्पन्न भएको मानिन्छ । यसर्थ तिल भगवान शिवलाई चढाउनु बर्जित छ ।३. भगवान शिवको उपासनामा बेसार पनि चढाउनु हुँदैन । बेसारको सम्बन्ध भगवान विष्णु र सौभाग्यसँग रहेको छ ।
अन्यथा बेसार चढाउने ब्यक्तिको चन्द्रमा पक्ष कमजोर भई मन चञ्चल हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा परीपक्क काम गर्न सकिदैन ।४. भगवान शिवलाई उमालिएको दुध पनि चढाउनु हुँदैन । उमालिएको दुधबाट शिवको अभिषेक गर्नु हानिकारक मानिन्छ । शिवलिंगको अभिषेक सदैव चिसो पानी वा काँचो दुधबाट गर्नुपर्दछ ।५. भगवान शिवलाई नरीवल चढाउन सकिन्छ । तर नरीवलको पानिको अभिषेक गर्नुहुँदैन । अन्यथा धन हानी हुन्छ ।६. भगवान शिवलाई अक्षता अर्थात रातो रंगमा मुसिएको चामल चढाउँनु हुँदैन ।७. टुक्रिएको चामल अर्थात कनिका समेत शिवलाई अर्पण गर्न बर्जित छ ।
८. भगवान शिवलाई शंख अर्पण गर्नुहुँदैन । शंखलाई शिवले बध गरेको असुरको प्रतीक मानिन्छ।९. कालो रंगको वस्त्र पहिरीएर शिब पुजन गर्नुहुँदैन । शिवलाई प्रसन्न पार्न गेरु वस्त्रको धारण उत्तम मानिन्छ ।१०. शिवलिंगमा चढाइएको प्रसाद भक्तले ग्रहण गर्नु हुँदैन, यसबाट दुर्भाग्य निम्तिन्छ ।११. शिवको अभिषेक गर्दा हमेशा सुन, चाँदी वा कासबाट बनेका भाडावर्तनबाट गर्नुपर्दछ । स्टील वा प्लास्टिकका भाडा शिव पुजनका क्रममा उत्तम मानिदैन ।१२. शिवलिंगमा पुजा गर्दा सबैभन्दा पहिला पञ्चामृत अर्पण गर्नुपर्दछ ।१३. शिवलाई तीन वटा पात स्पष्ट भएको, नच्यातिएको बेलपत्र घोप्टाएर मात्र अर्पण गर्नुपर्छ ।१४. शिवको उपासनामा केवल सेतो रंगको मात्र फुल अर्पण गर्नुपर्दछ । किनकी सेतो रंग भगवान शिवको प्रीय रंग हो ।१५. शिवको आराधना गर्दा कुनै मन्त्र नआए १ सय ८ पटक ॐ नमः शिवाय मन्त्रको जप गरे अरु कुनै मन्त्रको उच्चारण गर्नु पर्दैन ।